China Expanded Metal Wire Mesh ifektri kanye nabaphakeli | Ansheng
I-mesh yensimbi enwetshiwe iyinto yensimbi eyakhiwe ngomshini owandisiwe wokushaya ngensimbi nomshini wokugunda ukwakha i-mesh.
Izinto: Ipuleti ye-Aluminium, ipuleti lensimbi yekhabhoni ephansi, ipuleti lensimbi engagqwali, ipuleti le-nickel, ipuleti lethusi, i-aluminium magnesium alloy plate, njll.
Ukwaluka nezici: Kwenziwa ngokushaya izitebhisi nokwelula ipuleti lensimbi. Ubuso be-mesh bunezici zokuqina, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokushisa okuphezulu, nomphumela omuhle wokungenisa umoya.
Izinhlobo: Ngokuya ngesimo, ingahlukaniswa: umqulu, ishidi, njll.
Ngokuya ngendaba, ingahlukaniswa: i-aluminium mesh, insimbi engagqwali, i-iron mesh, i-galvanized steel mesh, i-nickel mesh njalonjalo.
Ngokuya ngesimo semeshi, ingahlukaniswa: i-rhombus, isikwele, imbobo eyindilinga, imbobo enezinhlangothi, imbobo yesikali senhlanzi, igobolondo lofudu njalonjalo. Ukucaciswa okukhethekile kungenziwa ngezifiso.
Ukwelashwa komhlaba: Ukufakwa kwe-PVC, i-galvanizing eshisayo, i-electro-galvanizing, i-anodizing (ipuleti le-aluminium), upende wokulwa nokugqwala, njll.
Isicelo:Yonke imikhiqizo yensimbi enwetshiwe ikhiqizwa futhi icutshungulwe ngobuchwepheshe bekhompyutha obuthuthukile, obunamaphethini ahlukahlukene emigodi nokuhlelwa okuguqukayo. Imikhiqizo inganqunywa, igotshwe, i-edging, ukwelashwa kwendawo nokunye ukucutshungulwa okujulile, okuyizinto ezahlukahlukene kakhulu.
1.Ingasetshenziselwa ukuhlunga umshini, umuthi, ukwenza iphepha, ukuhlunga, ukuvikela izwe lonke, imboni, ukwakha umkhumbi, umkhakha wezindwangu ezilula, umkhakha wezolimo kanye nohlangothi, i-aquaculture, imboni ye-petrochemical, izinto zasekhaya, ezisetshenziselwa ukufakwa kophahla okuhlanganisiwe, iminyango namawindi okulwa ukweba, ukudlula okuphephile, izitebhisi zephaseji Amabhodi, amatafula nezitulo, amaphayiphu, amafreyimu ahlukahlukene okuphatha izimpahla, amashalofu, njll.
2. Ingasetshenziselwa amaphrojekthi wokufaka indawo enkulu njengezakhiwo eziphakeme, izindlu zomphakathi, ama-workshops, njll. Isetshenziswa njenge-plaster substrate enokunamathela okuqinile, ukumelana nokuqhekeka, ukumelana nokuzamazama komhlaba nezinye izici. Luhlobo olusha lwezinto zokwakha zensimbi ekwakhiweni kwanamuhla futhi lungasetshenziselwa ukwakhiwa Ukuqiniswa kwamabhuloho emigwaqo emikhulu.
3. Ingasetshenziswa njengomgwaqo onguthelawayeka onguthelawayeka, uthango lwenkundla yezemidlalo, inetha lokuvikela ibhande eliluhlaza okomgwaqo, ukuvikelwa kwendawo yokuhlolwa komnyango wesayensi yezolimo kanye nokuhlolwa kwensimbi encane.
Ubuthakathaka (mm) I-SWD (mm) I-LWD (mm) Strand (mm) Ububanzi (m) Ubude (m) Isisindo (kg / m2)
Langaphambilini Nickel Wire Mesh
Olandelayo: Ashiselwe Wire Mesh